အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်အလုပ်ရုံစတင် | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်အလုပ်ရုံစတင်
02 / 12 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ
အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်သည် calistayi စတင်ခဲ့သည်
အဖွင့်မိန့်ခွန်းဖြင့် Istanbul မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်စည်ပင်မြို့တော်ဝန် Ekrem amomamoğlu'nunငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ခဲ့ပြီးအစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်၏ကဏ္aspectsများအားလုံးကိုစားပွဲပေါ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ အဆောက်အအုံများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများအားငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကျွမ်းကျင်သူများ၏ဘုံအမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာမှသက်ဆိုင်သူများအတူတကွစုဝေးသည့် Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) မှဖွဲ့စည်းသည့် Dep Istanbul ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါမောက္ခ၏ပထမ ဦး ဆုံးပြောသူ။ ဒေါက်တာ Marco Bohnhoff
IMM ဥက္ကrem္ဌ Ekrem amomamoğlu၏အဖွင့်မိန့်ခွန်းအပြီးတွင် Bohnhoff ကအင်တာပိုလီယန်မြောက်ပိုင်းပြိုကွဲမှု၏ S Seismotectonic Status Status နှင့်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်၏ပြင်းအားနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။
Bohnhoff က North Anatolian ပြတ်ရွေ့လိုင်းသည် 1766 နောက်ပိုင်း Marmara တိုင်းတွင်အမှားများကိုပိတ်ထားပြီးမဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင် 7,4 အရွယ်အစားအထိငလျင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဝေဖန်ခဲ့သည် Bonhoff ကသူ၏မိန့်ခွန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဆက်ပြောသည် -
Ere ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရ Marmara ရှိ 7,4 အထိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်။ သို့သော်ငလျင်ပြင်းအား 7,4 ပင်လျှင်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလွန်လူမှုစီးပွားရေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဒီအန္တရာယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်။
24 သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် Bonhoff ကစက်တင်ဘာလတွင် 5,8 ပမာဏရှိသောငလျင်သည်ဗဟို Marmara တွင်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
သားတော်နောက်ဆုံးငလျင်သည်ပိုမိုကြီးမားသောမြေငလျင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများသည်နှေးကွေးသွားသည်။ ဒေသတွင်းရှိငလျင်လှုပ်ရှားမှုများသည် 4,7 နှင့် 5,8 ပြင်းအားငလျင်များမတိုင်မီတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်တွေကိုအသက်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
မာကိုဘွန်ဟော့ပြီးနောက် Pierre ၏ဟင်နရီသည်သူ၏တင်ဆက်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် `အဏ္ဏဝါကမ္ဘာသိပ္ပံပညာ၏ပံ့ပိုးမှုသည်အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်လေ့လာမှုအားဟင်နရီသို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Dik ကျွန်ုပ်တို့သည် 1999 ငလျင်ပြီးနောက်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိလေ့လာရေးအိမ်များကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့များစွာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမှာတော့ Marmara ပြတ်ရွေ့ကပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာသော့ခတ်ထားတာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ”
Marmara ငလျင်နောက်ပိုင်းတွင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဆူနာမီများ၏လျှို့ဝှက်နက်နဲရာကိုထိန်းသိမ်းကာဟင်နရီကအမှား၏အစနှင့်အဆုံးအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် Marmara ရှိဆူနာမီဘေးအန္တရာယ်မှာဟင်နရီကိုမပြောဆိုနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားလွန်းသည်။ အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်များကြောင့်ဆူနာမီဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုသူကပြောသည်။
ကာဒီယိုလူး - WEZ အန္တရာယ်မလျှော့ဘဲပျက်စီးခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ”
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ဟောပြောသူတစ် ဦး မှာ Prof.Dr. ဒေါက်တာ “ အရေးပေါ်အခြေအနေဘေးအန္တရာယ်အခြေအနေ Mik” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မိန့်ခွန်းတွင် Mikdat Kadıoğluကအဓိကဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လျှင်ရဲ၊ လူနာတင်ယာဉ်နှင့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းများသည်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်။
Kadıoğluက“ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံပေါ်မှာဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့လိုတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကိုပြင်ပ၌အသိပညာပေးသင်တန်းများပေးရမည်။ လူတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောကြောင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောအခါရပ်ရွာအခြေပြုအခြေအနေကိုလက်ခံသင့်သည်။ ဘေးအန္တရာယ်အတွက်ပထမဆုံး 72 နာရီသည်အရေးကြီးသည်။ ဒီမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ပထမ ဦး ဆုံးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုးရွားဆုံးမြင်ကွင်းအရသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကာဒီယိုးက“ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကရှာဖွေခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ 34 သည်ပျက်စီးသွားသောအဆောက်အ ဦး တစ်ထောင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို 34 သို့လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ စွန့်စားမှုလျှော့ချပါကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအောင်မြင်ပါသည်။ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိပါကအကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိလှပါ။ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းများ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အုပ်စုများနှင့်ကဏ္fromများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့, အပြိုင်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူဆက်လက်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ဒုတိယနေ့တွင်ပြproblemsနာများနှင့်အဖြေများကိုဆွေးနွေးရန်စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
စင်ပြိုင် SESSIONS 1 ။ အပိုင်း
သင်ခန်းစာ - 1.1 - ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
သုံးသပ်သူ: Fouad Bendimerad (ငလျင်နှင့် Megasehir ပဏာမခြေလှမ်း)
Speaker: - Prof.Dr. ဒေါက်တာ ဒေါက်တာ Haluk Eyidoğan - Shoji Hasegawa (JICA) ကထိက။ အသင်း ၀ င် Meltem Şenol Balaban (အရှေ့အလယ်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်) - Erdem Ergin (UNDP)
သင်ခန်းစာ - 2.1 - အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု
သုံးသပ်သူ: ဒေါက်တာ Mikdat Kadıoğlu (İstanbulနည်းပညာတက္ကသိုလ်)
Speaker: - Zafer Baybaba (Istanbul ပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန) - Abdurrahman Yildirim (KIZILAY) - Murat Yazici (Istanbul Metropolitan Municipality) - Ali Nasuh Mahruki (AKUT ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ) - Assoc ။ ဒေါက်တာ GülşenAytaç (İstanbulနည်းပညာတက္ကသိုလ်)
သင်ခန်းစာ - 3.1: ISTANBUL မြေငလျင်ဘေးအန္တရာယ်
သုံးသပ်သူ: ဒေါက်တာ Marco Bohnhoff (GFZ)
Speaker: - Prof.Dr. ဒေါက်တာ Mustafa ကျနော်တို့ (တူရကီငလျင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ) - ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Haluk Özener (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Ziyadin Çakır (İstanbulနည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ Okan's Full Profile ကိုကြည့်မည် ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Semih Ergintav (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ Sinan Özeren (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်)
သင်ခန်းစာ - 4.1 - ဘေးအန္တရာယ်ဘဏ္ANCEာရေး
သုံးသပ်သူ - Pelin Kihtir Öztürk (ရည်မှန်းချက်များအတွက်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်း) Speaker: - TÜSİAD - Oktay အဘိုး (MUSIAD) - Nart Levent (စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း) - Yuichiro Takada (JICA ကတူရကီ) - ကြံ့ခိုင်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ
သင်ခန်းစာ - 5.1 - တည်မြဲသောအဆောက်အအုံများ
သုံးသပ်သူ: ဒေါက်တာ Atiye Tuğrul (İstanbulတက္ကသိုလ် - Cerrahpaşa)
Speaker: - Prof.Dr. ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Polat Gülkan (ayaankaya တက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Atiye Tuğrul (İstanbulတက္ကသိုလ် - Cerrahpaşa) ဒေါက်တာ Güray Arslan (Yıldızနည်းပညာတက္ကသိုလ်) - ဖာဒီErdoğan (İMSAD) - Sinan Türkkan (မြေငလျင်အားဖြည့်အဖွဲ့)
သင်ခန်းစာ - 6.1: ဂေဟစနစ်၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်း
သုံးသပ်သူ: ဒေါက်တာ Azime TEZER (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်)
Speaker: - Dursun Yıldız (ရေမူဝါဒဆိုင်ရာအသင်း) - Engin Işıltan (ÇEDBİK) Ender Peker (Çankayaတက္ကသိုလ်, အစ္စတန်ဘူလ်ပေါ်လစီရေးစင်တာ) - မူရင်း Gemciler (WWF တူရကီ) - Bahtiyar Kurt (UNDP မှ) - Assoc ။ ဒေါက်တာ Harun Aydın (Hacettepe တက္ကသိုလ်)
စင်ပြိုင် SESSIONS2။ အပိုင်း
သင်ခန်းစာ - 1.2 - ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်မှုဆက်သွယ်ရေး
သုံးသပ်သူ: Mehmet ÇAKILCIOĞLU (Istanbul Metropolitan Municipality)
Speaker: - Prof.Dr. ဒေါက်တာ Nuray Karancı (အရှေ့အလယ်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်) ကထိက။ အဖွဲ့ဝင် Canay Doğulu (TED တက္ကသိုလ်) ကထိက။ Gözdeİkizer (TOBB စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) - Assoc ။ ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာGülümTanırcan (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) ကထိက။ အသင်း ၀ င် Nazan Cömert Baechler (Marmara တက္ကသိုလ်)
သင်ခန်းစာ - 2.2: မြေငလျင်ပြီးနောက်တိုးတက်မှု
Moderator GürkanAKGÜN (Istanbul Metropolitan Municipality)
Speaker: - Selim Kaçmazoğlu (အမျိုးသားပညာရေးအမျိုးသား Nationalstanbul ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု) - Remzi Albayrak (İstanbul Metropolitan Municipality) - Giray Moralı (İstanbulသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု) - Assoc ။ ဒေါက်တာ Ezgi Orhan (Çankayaတက္ကသိုလ်)
သင်ခန်းစာ - 3.2 - ISTANBUL တွင်ပျက်စီးခြင်း
သုံးသပ်သူ: စီစီလီယာနီယပ်စ် (GFZ)
Speaker: - Prof.Dr. ဒေါက်တာ Eser Çaktı (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) - ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ Haluk Sucuoğlu (အရှေ့အလယ်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ ပါမောက္ခ Dr. Alper kilki (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်) - လက်ထောက် ဒေါက်တာ ပါမောက္ခ Dr. Nevra Ertürk (Yıldızနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ICOMOS) ကထိက။ အဖွဲ့ဝင်Özgün Konca (Boğaziçiတက္ကသိုလ်)
သင်ခန်းစာ - 4.2 - ဘေးအန္တရာယ်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်း
Moderator ကျနော်တို့ ER Mustafa (တူရကီငလျင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ)
speakers: - İsmetGüngör (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံ Institution မှ) - Mehmet Akif Eroglu (တူရကီအာမခံအစည်းအရုံး) - Serpil Ozturk (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံ Institution မှ) - ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Sinan Akkar (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) - Güneş Karakoyunlu (Milli-Re)
သင်ခန်းစာ - 5.2: ရေရှည်တည်တံ့သော URBANIZATION
Moderator: ပါမောက္ခဒေါက်တာ Orbrahim Orhan Demir (Istanbul Metropolitan Municipality) ဟောပြောသူများ - - Assoc ။ ဒေါက်တာ Ufuk Hancılar (Boğaziçiတက္ကသိုလ်) - Nusret Alkan (ŞGDAŞ) - METRO A.Ş. - အမ် Kemal Demirkol (GTE) - ISKI - KIPTAS
သင်ခန်းစာ - 5.3 - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီမံကိန်း
Moderator ဒေါက်တာ Nuran Zeren Gülersoy (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဟောပြောသူများ - ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ပါမောက္ခ Dr. Nihal Ekin Erkan (Marmara တက္ကသိုလ်) - ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ Handan Türkoğlu (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်) - Assoc ။ ဒေါက်တာ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Seda Kundak (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ပါမောက္ခဒေါက်တာ Zeynep Deniz Yaman Galantini (Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဒေါက်တာ ပိုပြီးကျွမ်းကျင်သူ murat balamir အမည်ရှိ
TEMA - 1 - ဘေးအန္တရာယ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှု
အကြောင်းအရာ -2- အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တိုးတက်မှု
အကြောင်းအရာ - 3: နားလည်နိုင်သောအန္တရာယ်
TEMA -4- ဘေးအန္တရာယ်ဘဏ္FINာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
အကြောင်းအရာ -5- ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစနစ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
TEMA-6: ဂေဟစနစ်၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်း
Düzceရှိ Ankara-Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ…
တင်ဒါအသိပေးချက် - လမ်းသုံးယာဉ်များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆောက်အ ဦး …
တင်ဒါအသိပေးချက် - ဂေါလ်ဘasiဂါဒါတွင်တည်ရှိသောအဆောက်အအုံများငလျင်လှုပ်ခြင်း…
Adnan Menderes လေဆိပ်ငလျင်လှုပ်ခြင်း ...
မြောက်အမေရိက Anatolian အမှားလိုင်း
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 3၊ ဒီဇင်ဘာလ 1918၊ ဗြိတိန်၊ ဂျာမန်